U Gaar Ah Ragga: Kalmado Cajiib Ah Oo Ruxa Qalbiga & Dareenka Gabadha Hadii Ay Kaa Maqasho Nafteeda Ayay Kuu Hibaynaysaa – Allsomali.net
HomeArimaha JacaylkaU Gaar Ah Ragga: Kalmado Cajiib Ah Oo Ruxa Qalbiga & Dareenka Gabadha Hadii Ay Kaa Maqasho Nafteeda Ayay Kuu Hibaynaysaa
10 April 2021 allsomali Arimaha Jacaylka, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Waxa la sheegaa in ay Dumarku jecelyihiin Dhagahooda ka hor Indhohooda waxana ay leedahay dareen ka xoogan Ragga halka ay jeceshahay in ay Ninka ka maqasho kalmado jacayl iyo shukaansi macaan kuwaas oo ruxaya qalbigeeda iyo dareenkeeda iyada oo doonaysa in ay dareento in ay tahay mid khaas ah.
Hadaba waxa aan halkan kuugu soo bandhigaynaa kalmadaha saamayta waalid ah ku yeesha qalbiga Gabadha:
1.Mar Walba Waan Ku Ilaalin Doonaa:
Gabadha ayaa raadisa dugsoon, amaan iyo ilaalin ay ka hesho Gacaliyeheeda sidaas darteed mar walba oo ay dareento Cabsi wax walba oo awoodaada ah u samee in aad difaacdo waliba farxad galiso waxana ay arintaas ruxaysaa qalbigeeda.
2.Waan Ku Cafiyay:
Marka aad Gabadha ka cafiso khalad ay samaysay waxa ay arintaas cadayn weyn u tahay jacaylka aad u qabto waxana ay sidoo kale muujinaysaa in ay dareento in aad tahay qof fahmaya maadama uu qof walba gali karo khalad maadama aadame la yahay.
3.Nasiib Ayaan Leeyahay In Aad Noloshayda Ka Mid Tahay:
weedhan ayaa gabadha u muujinaya sida ay qaaliga uga tahay Agtaada iyo muhiimada ay Kuu leedahay in ay ka mid tahay Noloshaada iyo sida aad ugu faraxsantahay in ay ka qayb tahay noloshadaada laakiin marka aad hadalkaas u sheegto qalbigeeda ayaa ruxmaya waxana ay si daacad ah kuugu furaysaa qalbigeeda.
4.Waan Ka Helaa Dhoolacadayntaada & Qosolkaaga:
Waxa laga yaabaa in weedhan ay kula fududahay adiga laakiin waxa ay qalbiga Gabadha ku leedahay saamayn mucjiso leh oo cajiib ah waxana ay ruxdaa qalbiga iyo dareenka Gabadha.
5.Gacaliso Waad Ka Duwantahay Dumarka Kale:
Gabadh walba way jeceshahay in ay weedhan ka maqasho Gacaliyeheeda sababta oo ah waxa ay jeceshahay in ay dareento in ay tahay qof khaas ah waliba ka duwan Gabdhaha kale ee qayrkeed ah waxana ay sidoo kale u muujinaysaa in ay qalbigaaga ku leedahay boos khaas ah.
6.Aad Ayaan U jecelahay Dookhaaga:
Hadii ay la xidhiidho qaabka Labiskeeda, Go’aanadeeda ama dookhyada kale ee ay qaadato, Bogaadinta dookha Gabadha ayaa ah amaan cajiib ah taas oo dareensiisa farxad weyn taas oo kor u qaada kalsoonideeda.
7.Waa Ku Qurux Badantahay Wax Walba Oo Aad Xidhato:
Dumarka ayaa ku dadaala in ay dharka ugu quruxda badan u xidhaan kana soo muuqdaan indhaha gacaliyohoda laakiin marka aad u sheegto in ay ku qurux badantahay wax walba oo ay xidhato waxa ay ka dhigaysaa mid faraxsan waxana ay kor u qaadaysaa kalsoonideeda in aad jeceshahay wax walba oo ay xidhato.